मौन अवधिमा के-के गर्न हुँदैन ? - Lekhapadhi.com राजनीति : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
मौन अवधिमा के-के गर्न हुँदैन ?
लेखक : लेखापढी २७ बैशाख २०७९, मंगलवार ०८:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज (मंगलबार) मध्यराति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले मौन अवधि पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयगले जनाएको छ ।
मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार-प्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा-सम्मेलन, कार्यशाला र गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन ।
मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार-प्रसारका सामग्री मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि नै हटाउनुपर्छ ।
कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइँदैन ।
अनलाइन, छापा, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार-प्रसार सामग्री पोस्ट शेयर गर्न वा गराउन पाइँदैन ।
निर्वाचन आयोगले मौन अवधि सुरु भएदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्रीवितरण र सेवनमा समेत रोक लगाएको छ ।
मेयर लड्न उपसचिवबाट राजीनामा दिएका भुसालले पाएनन् टिकट
जगन्नाथ पौडेलले पाए चुनाव चिन्ह्व ‘भुइँकटहर’
भुवन केसी र श्वेता खड्का र रवीन्द्र खड्का नेपाली कांग्रेस प्रवेश